Automotive Waya njikota suppliers na Factory - China Automotive Waya njikota Manufacturers
Nkọwapụta Modeldị Ngwaahịa Number sensor: eriri USB-06 Aha aha: Olink Mmalite: China (Chile) A na-ejikarị eriri eriri dị ka geometric na eletriki chọrọ. Mgbe ahụ, a na-enye eserese (ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na ileba anya) maka nkwadebe na mgbakọ. A na-ebu ụzọ wepụ wires ndị ahụ n'ogologo achọrọ, na-ejikarị igwe na-egbutu waya pụrụ iche. Enwere ike ibiputa wires ndị ahụ site na igwe pụrụ iche n'oge oge igbutu ma ọ bụ na igwe dị iche. Mgbe nke a gasịrị, e ...
Nkọwapụta Modeldị Ngwaahịa Number sensor: eriri USB-06 Aha aha: Olink Mmalite: China (Chile) A na-ejikarị eriri eriri dị ka geometric na eletriki chọrọ. Mgbe ahụ, a na-enye eserese (ma ọ bụ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ na ileba anya) maka nkwadebe na mgbakọ. A na-ebu ụzọ wepụ wires ndị ahụ n'ogologo achọrọ, na-ejikarị igwe na-egbutu waya pụrụ iche. Enwere ike ibiputa wires ndị ahụ site na igwe pụrụ iche n'oge oge igbutu ma ọ bụ na igwe dị iche. Mgbe nke a gasịrị, en ...
Waya njikota N'ihi UTV Car
Nkọwapụta ISO IATF gbaara ụlọ ọrụ mmepụta ihe Industrial na Automotive ngwa Wiring njikota Model Number: akpakanamde waya njikota 04 Ebe O Si Malite: Olink ikike: 5.2USD MOQ: 120 × 140 × 25 Centimeters Products SGS IATF16949, CE certification cable Plastic shei: naịlọn PA66 Ọnụ: tinned ọla kọpa Waya: ọla kọpa isi, ịkwanyere jaket gosiri okpomọkụ: -25 ka + 85 ° C Waya njikota: ịkwanyere, roba, silicone frequencywa ugboro: 50 / 60Hz Na ọdabara ugbu a: 3A ọdabara voltaji: 250V AC / DC Flammabilit ...
Nkọwa Elu àgwà Professional waya njikota USB nzukọ, OBD USB nzukọ. Nọmba :dị: Njikwa eriri igwe 18 Ebe O Si Malite: Olink ikike: 3 USD MOQ: 80 × 100 × 19 Centimeters Ngwaahịa 1) OBD II nkuku aka nri nwoke na nwanyi Cable 2) Ogologo = 0.4m 3) Ngwa: nnyefe data ụgbọ ala 4) ihe: Njikọ: gold plated, nickel plated eduzi: ọcha ọla kọpa AWG: 24 # / 26 # / 28 # Shield: foil na gburugburu Jaketị: ịkwanyere, Black voltaji: 12V / 24V 5) Ule: 100% ule 6) Asambodo: ROHS 7) Agha ...
Motorcysle Waya njikota USB Assembly
Motorcycle Waya njikota USB Assembly
Nkọwa nke waya harenss maka akpakanam Model Number: waya harenss maka akpakanamde Ebe nke Si Malite: waya haress maka akpakanwụ ikike: waya harenss maka akpakanamde MOQ: waya harenss maka akpakanamde eriri igwe Ule Nwale eletriki arụmọrụ nke a waya ma ọ bụ eriri njikota nwere ike mere na enyemaka nke ule ule. A na-ahazi ụlọ ọrụ ule ahụ na njirimara eletriki chọrọ, a ga-etinyekwa eriri ahụ agwụ n'ime ụlọ nyocha wee nwalee n'otu n'otu ma ọ bụ na mu ...
Nzukọ USBVV Video